MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2015-01-18
at 1/24/2015 11:53:00 PM No comments:
at 1/24/2015 11:35:00 PM No comments:
at 1/24/2015 11:28:00 PM No comments:
ကြာမြင့်လှ ပြီဖြစ်သော ပြည်တွင်း စစ် ပဋိပက္ခ များကြောင့်ဖြစ်ပေါ် လာသည့် စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်များ အရေး၊ဒေသ တွင်းဖွံ့ဖြိုးမှု အခြေအနေ၊ ထိုဒေသနေပြည် သူ တို့၏ ကျန်းမာရေး၊ ကလေးများ အနာဂတ် အတွက် ပညာရေး အစရှိသည် အခြေ အနေတို့ လွန်စွာ နိမ့်ပါးနေ သည်ကိုလည်း အားလုံး အသိပင်ဖြစ်သည်။
at 1/24/2015 11:26:00 PM No comments:
ကျွန်တော် ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက် က ရန်ကုန် ပတ်ခ်ရွိုင်ရယ် ဟိုတယ်မှာ Internews Myanmar အဖွဲ့ရဲ့ 'မီဒီယာနဲ့ လူထုအဖွဲ့ အစည်း အကြား အပြန်အ လှန်ဆွေးနွေးပွဲ ကို တက်ခဲ့တယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲ ကို ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ မီဒီယာ သတင်းဖော်ပြမှုများ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ကောင်း မွန်ရေးအစီ အစဉ် အရပြု လုပ်တဲ့နောက် ဆုံးဆွေးနွေး ပွဲဖြစ် ပါတယ်။
အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲ၊လူမျိုးရေး ဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်း မီဒီယာတွေ ဘယ်လိုဖော်ပြနေကြသလဲ၊ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အတွင်း မှာတိုးတက်မှု ရှိလာသလား၊နောက်ထပ် ဘာလို အပ်ချက်ေ တွ ရှိဦးမလဲ အပြန် အလှန် ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းဆွေးနွေး ကြတာပါ။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီနေ့ဆွေးနွေး ပွဲထက်Internews အဖွဲ့ရဲ့တစ်နှစ်ကြာ သတင်းမီဒီယာ သင်တန်း အစီအစဉ် အကြောင်းပြောပြ ချင်ပါတယ်။
at 1/24/2015 11:25:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် တောမှော်ကျေး ရွာမှာ သစ်ဆွဲ အိမ်ဆင် တစ်ကောင်ဟာ မုန်ယိုပြီး လိုက် လံသောင်းကျန်းနေရာမှာ လူငါးဦးသေ ဆုံး ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီဆင်ရဲ့အမြင့်ဟာ ၉ပေနီးပါးရှိပြီး အရွယ်အစား ကြီးမားတဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးနှိမ်နှင်းဖို့ ခက်ခဲနေကြောင်း လုံးခင်းကျေးရွာသား ဦးတင့်စိုးက ပြောပြပါတယ်။
at 1/24/2015 11:24:00 PM No comments:
at 1/24/2015 11:22:00 PM No comments:
at 1/24/2015 11:21:00 PM No comments:
at 1/24/2015 11:14:00 PM No comments:
at 1/24/2015 11:13:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အို အစိုးရ တောင်ပိုင်း တိုင်း ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၄) လက်အောင် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၉) ဒေသဖြစ်သော နမ့်အုမ်နှင့် နမ့်ခမ်းကြား Mum Pri Bum တွင် တိုက်ပွဲဖြစ် ပွားနေကြာင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ ဗမာအစိုးရ စစ်တပ် တပ်မ (၈၈) မှ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၉) လက်အောက်၊ တပ်ခွဲ (၂) တို့၏ Mun Pri Bum စခန်းကို ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာခြင်းကြောင်း ယခုသတင်းရေးသားချိန်တွင် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနျင့် ဗမာစစ်တပ်တို့ပြင်းထန်စွာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြာင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ထို့အတူ မူဆယ်နှင့် ကွတ်ခိုင်ကြား Nam Hpulun Bum တွင်လည်း သတင်းရေးသားချိန်အထိ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေကြာင်း သတင်းရရှိပါသည်။
at 1/24/2015 11:11:00 PM No comments:
ကေအိုင်အေတပ်ရင်း (၃၆) နယ်မြေတွင် တိုက်ပွဲပြင်းထန်လျက်ရှိ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အို အစိုးရ တောင်ပိုင်း တိုင်း ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၄) အုပ်ချုပ်ဒေ သဖြစ်သော မုံဘောနယ် ဘန်ကန်း Chyahka Kawng တွင် ယခုအချိန်တိုက်ပွဲ များ ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါ သည်။ ကေအိုအေ တပ်ရင်း (၃၆) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာစစ်တပ် ခလရ (၁၀၃) တို့နှင့် တိုက်ပွဲပြင်းပြင်း ထန်ထန်ဖြစ် ပွားနေကြောင်း ရှေ့တန်း သတင်းအရသိရှိရပါသည်။
at 1/24/2015 11:09:00 PM No comments:
Lahta Sam Mung, KIA Dap Ba (4) npu Dap Dung (36) ginra Mung Baw Mai Hpang makau kaw myen asuya hpyen dap Dap Nu (88) npu na Hk.L.Y (103) dap na Bo Moe Thet Nain Oo woi awn ai hpyen hpung ni hte KIA Dap Dung (36) na hpyen hpung ni gasat gala majan byin ai lam chye lu ai.
at 1/23/2015 10:28:00 PM No comments:
အသတ်ခံရသည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဆရာမနှစ်ဦး ဈာပန လူသောင်းချီလိုက်ပို့
အဓမ္မပြုကျင့်ခံရ ၍ သေဆုံး ခဲ့သော ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် အဖွဲ့ချုပ် (KBC) ၏ ကချင်ကျောင်း ဆရာမ နှစ်ဦး၏ ရုပ်အလောင်းကို ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်တွင် ကချင်လူထု သောင်းနှင့်ချီ ကချင်ပြည် နယ် မြစ်ကြီး နားမြို့ ဂျော်ဘွမ်သုဿန်သို့ လိုက်ပို့ခဲ့ သည်ဟု ဈာပန အခမ်းအနား တက်ရောက်ခဲ့သော ၈၈မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့ အစည်းမှ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြအေးက ပြောသည်။
ကချင်ပြည်သူလူလူထုများသည် ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီချိန်တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့ ရှမ်းစုတောင်ရပ်ကွက်ရှိ KBC ကျောင်းဝင်းမှ တပ်ကုန်းရပ်ကွက်ထိ ဆရာမနှစ်ဦး၏ အခေါင်းကို လူနှင့်ထမ်း၍ သယ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ထိုမှ နောင်နန်းကျေးရွာရှိ AD 2000 ခန်းမထိ ကားဖြင့် ဆက်လက် သယ်ဆောင်သွားခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
at 1/23/2015 10:03:00 PM No comments:
at 1/23/2015 10:00:00 PM No comments:
at 1/23/2015 09:58:00 PM No comments:
at 1/23/2015 04:30:00 PM No comments:
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်း ချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော် မတီ (UPWC) နဲ့ တနိုင်ငံ လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်းရေး အဖွဲ့ (NCCT) တို့ အကြား “၇” ကြိမ်မြောက် ဆွေးနွေးပွဲ စနိုင်ဖို့ အကြိုညှိနှိုင်းမှု ကို မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်း ဗဟို ဌာန (MPC) နဲ့ NCCT တို့ အခုလ ၂၁ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
at 1/23/2015 04:23:00 PM No comments:
at 1/23/2015 09:32:00 AM No comments:
အပစ်ရပ်ရေးဆွေးနွေးမှု မပြီးသေးသဖြင့် လက်မှတ်ထိုးရန် မဖြစ်နိုင်သေး
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှု မပြီးသေး သဖြင့် လာ မည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက် (ပြည်ထောင်စုနေ့) တွင် လက်မှတ် ထိုးရန် မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန် လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်း ဗဟိုဌာန (MPC) နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်းရေး အဖွဲ့ (NCCT) ကိုယ်စား လှယ်များက ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ (UPWC)နှင့် NCCT တို့ (၇) ကြိမ်မြောက် ထပ်မံ တွေ့ဆုံရန် အကြို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်က ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
at 1/23/2015 09:31:00 AM No comments:
ကချင်အမျိုးသမီးနှစ်ဦး သတ်ဖြတ်ခံရမှု ကုလသမဂ္ဂထံ တင်ပြမည်
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင်၊ ကောင်းခါးကျေး ရွာမှာ ကျောင်းဆရာမနှစ်ဦး သတ်ဖြတ်ခံရမှုကို ကုလ သမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီထံ တင်ပြသွားမယ်လို့ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ရှိသူက ပြော ပါတယ်။
မှုခင်းစစ်ဆရာဝန်ရဲ့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နဲ့ ကောင်းခါး ရွာသားတွေရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေကို စုစည်းပြီး တင်ပြ သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် က ဒေါက်တာဆမ်ဆွန် က ပြောပါတယ်။
at 1/23/2015 09:29:00 AM No comments:
at 1/23/2015 09:28:00 AM No comments:
at 1/23/2015 09:27:00 AM No comments:
at 1/22/2015 10:53:00 AM No comments:
ကေအိုင်အေနဲ့ အစိုးရစစ်တပ်တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ပိတ်မိနေတဲ့ ဖားကန်မြို့နယ်က ဒေသခံ နှစ်ထောင်၂၀၀၀ ကျော်လောက်ရဲ့ စားဝတ်နေရေးကို မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က တာဝန်ယူပေးမှာဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ဒီနေ့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့က ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ပြောလိုက်တာဖြစ် တယ်လို့ PCG အဖွဲ့ဝင် ဦးလမိုင်ဂွန်ဂျာက ပြောပါတယ်။
at 1/22/2015 10:52:00 AM No comments:
ဆရာမ ၂ ဦး အဓ္ဓမပြုကျင့်သေဆုံးမှု ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အစိုးရတပ်နှင့် ဒေသခံများကို စတင်စစ်ဆေးနေ
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မူဆယ် ခရိုင် ပန်ဆိုင်းမြို့နယ် နမ့်တောင်းကျေးရွာ အုပ်စု ကောင်းခါးကျေးရွာတွင် ကချင်ကျောင်း ဆရာမနှစ်ဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရ၍ သေဆုံးခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆေးစစ် ချက်များထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေး ဘဲ အစိုးရ ရဲတပ်ဖွဲ့က စစ်ဆေးမှုများ စတင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သေဆုံးသူ ဆရာမနှစ်ဦး၏ အလောင်းကို မူဆယ်ဆေးရုံတွင် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်က ဆေးစစ်ခဲ့ပြီးသော်လည်း အစိုးရ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆေးစစ်တမ်းများကို ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးဘဲ မူဆယ်ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ကောင်းခါးကျေးရွာရှိ ဒေသခံများနှင့် အစိုးရ စစ်သားများကို ပထမဆုံးအကြိမ် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
at 1/22/2015 10:50:00 AM No comments:
ရှမ်းပြည် နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင် ပန်ဆိုင်း (ကြူကုတ်) မြို့နယ် ကောင်းခါးရွာ မှာ စေတနာ့ ၀န်ထမ်းအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေ တဲ့ ကျောင်း ဆရာမနှစ်ဦးကို ဒီလ ၁၉ ရက်ညနဲ့ ၂၀ ရက်နေ့မနက် အစော ပိုင်းလောက်မှာ အမည်မသိသူတွေက အဓမ္မပြုကျင့် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
at 1/22/2015 10:48:00 AM No comments:
မြန်မာ့တပ်မတော် နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်တို့ကြား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကချင်အမျိုး သားများအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ သဘောထားထုတ်ပြန်
မြန်မာ့တပ်မတော် နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်တို့ကြား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကချင်အမျိုး သားများအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့၏ သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းသိရသည်။
သဘောထားထုန်ပြန်ကြေညာချက်စာတွင် ပြည်သူများကို တံတိုင်းအဖြစ် အသုံးချခြင်း၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ် ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်မှုပြုလုပ်ခြင်း၊ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းများမပြုလုပ်ရန် နှစ်ဖက်တပ်များအား အလေး အနက်တောင်းဆိုကြောင်းပါရှိသည်။
at 1/21/2015 09:28:00 PM No comments:
at 1/21/2015 09:19:00 PM No comments:
at 1/21/2015 09:15:00 PM No comments:
တပ်မတော်သားတစ်ဦးမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား သားမယားပြုကျင့်ရန်ကြံစည်
နမ့်မတူမြို့နယ် ၊ ခူဖိတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခူမောကျေးရွာတွင် မြန်မာ့တပ်မတော် တပ်မ ၇၇ မှ တပ်သားတဦးမှ အသက် ၃၀ အရွယ် အမျိုးသမီးတဦးအား ၂၀၁၅ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်နေ့နေ့လည်ပိုင်းတွင် မုဒိန်းကျင့်ရန် အတင်းအဓမ္မကြံစည်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
သို့သော် အမျိုးသမီးမှ အော်ဟစ်သဖြင့် ထိုအမျိုး သမီးအား ထိုးကြိတ် ရိုက်နှက်ခဲ့သဖြင့် အသက်သေ ဆုံးလုနီးပါး ဖြစ်နေချိန်တွင် အိမ်နီးနားချင်းများမှ ပြန်လည်ကူညီပေးခဲ့သည့်အတွက် ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရသည်။
at 1/21/2015 01:05:00 PM No comments:
တရုတ်ကွန်မြူနစ် ပါတီ သတင်း စာ ဖေါ်ပြချက် တရုတ်အစိုး ရ ငြင်းဆို
မြန်မာနိုင်ငံ ကချင်ပြည်နယ်မှာ အစိုးရနဲ့ KIA ကြား ပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေအတွင်း ပိတ်မိနေကြတဲ့ အရပ် သားတွေထဲမှာ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ ပါဝင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဟာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန ပြောခွင့်ရသူက အင်္ဂါနေ့က ပြောပါတယ်။
မြစ်ကြီးနားမြို့ကို သွားရောက်ခဲ့ကြတဲ့ တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်အဖွဲ့ရဲ့ ကနဦး စုံစမ်း မေးမြန်းချက်တွေအရ ဒီသတင်း မဟုတ်မှန်ကြောင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်က အခြေအနေ တွေကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပြီး၊ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ အခွင့်အရေး တွေစိတ်ချရအောင် ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောခွင့်ရ အမျိုးသမီး ဟွာချောင်ရင် က ပြောပါတယ်။
at 1/21/2015 12:27:00 PM No comments:
at 1/21/2015 12:23:00 PM No comments:
at 1/21/2015 12:21:00 PM No comments:
at 1/21/2015 09:15:00 AM No comments:
at 1/21/2015 09:14:00 AM No comments:
စစ်ပွဲအတွင်း ပိတ်မိနေသော ရွာသားများကို တွေ့ဆုံကူညီရန် PCG အား အစိုးရတပ် ခွင့်မပေး
ဖားကန့်မြို့နယ် တိုက်ပွဲအတွင်း ပိတ်မိနေသော သန်းဂေါင် (အောင်ဘာလေ) ကျေးရွာသား များအား အစိုးရစစ်တပ်က အကူညီပေးမည့် အဖွဲ့အများ အပါအ၀င် ကချင်ငြိမ်း ချမ်းရေး အကျိုးဆောင် (PCG) ကိုယ်စား လှယ်များကိုလည်း သွားရောက်တွေ့ ဆုံခွင့် မပေးသောကြောင့် ၄င်းတို့ အတွက် ရိက္ခာပြတ်လပ်မှုအခက်ခဲ စိုးရိမ်စရာရှိသည်ဟု PCG မှ ဦးလမိုင်ဂွမ်ဂျာက ပြောသည်။
ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်မှ ၂၀ ရက်ထိ ခြောက်ရက်ကြာ အစိုးရ စစ်တပ်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA)စစ်တပ်တို့အကြား တိုက်ပွဲအတွင်း ပိတ်မိနေသော ရွာသား ၁၀၀၀ ကျော်ကို သွားရောက် တွေ့ဆုံရန် အစိုးရ စစ်တပ် တပ်မ ၆၆ တပ်မမှူးက ခွင့် မပြုခြင်း ဖြစ်သည်။
at 1/21/2015 09:10:00 AM No comments:
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ ကျရောက်တဲ့ ၆၈ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ မှာ တနိုင်ငံလုံး အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေးစာချုပ် ချုပ်ဆို ဖို့ ကမ်းလှမ်း ထားပေမယ့် လတ်တလော ကချင်ပြည်နယ် မှာ တိုက်ပွဲတွေ အပြင်း အထန် ပြန်လည် ဖြစ်ပွား လာတာမို့ သမ္မတရဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကမ်းလှမ်းချက် မှာ KIA ပါဝင်နိုင်ဖို့ အလား အလာ အတော်ကို နည်းပါးနေပါပြီ။
at 1/20/2015 09:19:00 PM No comments:
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ လက်ထဲမှာရှိကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ပြော
မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိဖို့ဆိုတာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ထဲမှာ သာ ရှိကြောင်း မြန်မာ့ တပ်မတော် အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် က ပြောလိုက်ပါတယ်။
စင်္ကာပူ အခြေစိုက် Channel News Asia သတင်းဌာန က တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာမှာ ပြောကြားခဲ့တာပါ။
at 1/20/2015 09:16:00 PM No comments:
at 1/20/2015 09:14:00 PM No comments:
ထိန်းသိမ်းခံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦး လက်နက်မဲ့ဖြင့် ကေအိုင်အေ ပြန်လွတ်
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (ကေအိုင်အေ) တပ်မဟာ ၂ တပ်ရင်း ၆ မှာ ၅ ရက်တာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အစိုးရရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးကို ဇန်န၀ါရီလ ၁၉ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီမှာ ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ပြန်လွတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်လိုကတိက၀တ်တွေမှ မရှိပေမယ့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ လက်နက်တွေတော့ ကေအိုင်အေက ထိန်းသိမ်းထားဆဲဘဲလို့ သူတို့ကို သွားကြိုခဲ့တဲ့ ကချင် ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးတော်ဆောင် ဦးလမိုင်ဂွန်ဂျာက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
at 1/20/2015 09:12:00 PM No comments:
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက် ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင် ပန်ဆိုင်း (ကြူကုတ်) မြို့နယ် ရှဘုတ် ကောင်းခါးကျေး ရွာမှာ မနေ့ညက အသက် ၂၀ အရွယ် ကချင် ကျောင်း ဆရာမ နှစ်ဦး အခန်းတခု အတွင်း ဒဏ်ရာ ဗလပွနဲ့ သေဆုံး ခဲ့ပါတယ်။
ကချင်နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ်က အခမဲ့ စာသင်ကြားပေးနေတဲ့ ကျောင်းဆရာမ ဆရာမ မရန်လုလာနဲ့ တန်ဘောင် ခေါန်နန်ဆင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
အလောင်းတွေကို မူဆယ်ဆေးရုံကို သယ်ယူလာပြီး စစ်ဆေးနေတယ်လို့ ဆေးရုံမှာ လိုက်ပါလာတဲ့ မူဆယ်ခရိုင် ခရစ်ယာန်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်က လူငယ်တာဝန်ခံ ကိုဇွာရာ (Mr. Zau Ra) က ပြောပါတယ်။
at 1/20/2015 09:10:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ဒေသ က တိုက်ပွဲကြားမှာ ပိတ်မိနေ တဲ့ အောင် ဘာလေရွာက ရွာသားတွေဟာ အခုအခါ ကံဆီးရွာ ကို ပြောင်းရွှေ့နေ ထိုင်နေကြပြီး သူတို့တွေဟာ ပိုမိုလုံခြုံတဲ့ ဖားကန့် ဘက်ကို ပြောင်းရွှေ့ချင်ပေမဲ့ ရွှေ့ပြောင်းခွင့် မရသေးပါဘူး။
လောလောဆယ်မှာ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေးတွေ ပြတ်တောက်နေ တာကြောင့် ရက်ရှည်ကြာ လာမယ်ဆိုရင် စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်တွေဟာ ရိက္ခာ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့လာရဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
at 1/20/2015 09:06:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် အတွင်း အစိုးရ စစ်တပ်နှင့် ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) တို့ အကြား တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေသဖြင့် ဒေသခံ တထောင်ကျော် ဖားကန့်မြို့ အနီး ကံဆီး ဆိုင်းရာ ကျေးရွာတွင် ပိတ်မိနေကြောင်း သတင်းရ သည်။
“ပိတ်မိနေတဲ့ ဒုက္ခ္ခ္ခသည်တွေက ကျနော်တို့ဆီ ဖုန်းဆက်လာလို့ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ ၁၈ ရက်က သွားကယ်ဖို့ လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဆန်ခါ ကနေ ပြန်လှည့်လာရတယ်။ အခုထိ သွားကယ်ဖို့ လမ်းမဖွင့်သေးဘူး။ ဒုက္ခသည်တွေကိုလည်း ထွက်ခွင့် မပြုဘူး။ ပိတ်မိတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေက တထောင်ကျော်တယ်”ဟု ဖားကန့်မြို့၌ လူထု အခြေပြု လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ဦးမရန်ဂျာလက ဆို သည်။
at 1/20/2015 09:05:00 PM No comments:
at 1/20/2015 09:01:00 PM No comments:
အောင်ဘာလေဒေသခံများသွားကယ်ရန် တပ်မ(၆၆)ခွင့်မပြုသည့်အတွက် PCG အဖွဲ့မြစ်ကြီးနားသို့ပြန်လှည့်
ပိတ်မိနေသည့် အောင် ဘာလေကျေးရွာ ရှိ ဒေသခံများအား သွားရောက်တွေ့ ဆုံခေါ်ဆောင် ရန် ငြိမ်း ချမ်းရေး အကျိုးဆောင် PCG အဖွဲ့မှကြိုး ပမ်းသော်လည်း အစိုးရ တပ်မတော် တပ်မ(၆၆) တပ်မမှူးမှ ခွင့်မပြုသည့်အတွက် ယခုအချိန် တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့ သို့ပြန်လှည့် လာပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
at 1/20/2015 09:00:00 PM No comments:
ဖားကန့် ကံဆီးဒေသသို့ ၀ါဒဖြန့်ရန် မြ၀တီ သတင်းထောက်များရောက်ရှိနေ
ယခု အချိန်ဖားကန့် ကံဆီးကျေးရွာ တွင် အစိုးရပိုင် မီဒီယာဖြစ်သည့် မြဝတီ သတင်းထောက် နှင့် မြန်မာ့ အသံသတင်းထောက် များရောက် ရှိနေပြီး မမှန်မကန် ဝါဒဖြန့်ရန် အတွက် အောင်ဘာလေကျေးရွာ သို့ရောက်ရှိကာ ဒေသခံမဟုတ်သည့် အခြားသူ များ အစိုးရ၀န်ထမ်း များအား အင်တာ ဗျူးများမေးမြန်ခြင်း များ ပြုလုပ်လျက် ရှိကြောင်း ဖားကန့်ဒေသခံများမှ ဆိုသည်။
at 1/20/2015 08:59:00 PM No comments:
at 1/20/2015 08:57:00 PM No comments:
၄င်းတို့ စခန်းတိုက်ခံရ ပါက ကချင်ရပ်ကွက်အား လက်နက်ကြီးဖြင့် ထုမည်ဟု ဗမာ ဗျူဟာမှုးပြော
ဖားကန့် ကားမိုင်း မြန်မာ စစ်တပ်မှ ဗျူဟာမှုးက မိမိတို့စခန်း အား ကေအိုင်အေ မှ လာရောက် တိုက်ခိုက် ခဲ့ပါသ၊ အတိုက်ခံရပါက ကချင်ရပ်ကွပ်များကို လက်နက်ကြီးနှင့် ထုမည်ဟု ချိန်းခြောက်နေ ကြောင်း ဒေသခံများ ထံ မှ သတင်းပေးပို့ လာပါ သည်။ မြန်မာ စစ်တပ်မှ ထို သို့ ပြည်သူများအား ခြိမ်းခြောက် နေခြင်း ကြောင့် ကားမိုင်းပြည်သူတွေက စိုးရိမ်စိတ် နဲ့ ရင်တမမ နှင့် နေနေရ ကြောင်း ကို လည်း ဒေသခံများထံမှ ထပ်မံ သိရှိရပါသည်။
ပြည်သူ ကို ကာကွယ်သည့် မြန်မာ့ တပ်မတော် ဆို ပါလား။
at 1/20/2015 08:50:00 PM No comments:
ဖါးကန့် ရှေ့တန်း သို့ လက်နက်သယ်လာသော မြန်မာ စစ်ယာဉ်တန်း ဖောက်ခွဲခံရ
၁၉.၁.၂၀၁၅ ရက်နေ့ ကချင် ပြည်နယ် ဖါးကန့် ၊ ဥရုဆိုင်းမော် ကေအိုင်တပ်ရင်း (၆) ဒေသရှိ လက်ရှိ တိုက်ပွဲ များ အပြင်း အထန် ဖြစ် ပွားနေ သော ရှေ့တန်း စစ်မြေပြင်
သို့ မြန်မာ စစ်တပ်မှ လက်နက် များ ဖြည့်တင်းရန်အတွက် စစ်လက်နက် များ အပြည့် တင်ဆောင် လာသော မြန်မာ စစ်တပ်၏ယဉ်တန်း လမ်း၌ ဖေါက်ခွဲ ဖျက်ဆီး တိုက်ခိုက်ခံ ရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
၄င်း စစ်ယာဉ်တန်း သည်ဖါးကန့် -လောင်ခမ်-ဆိုင်းခ လမ်းအတိုင်း ဖါးကန့် ဂင်ဆီဆိုင်းရာ သို့ လက်နက် များ လာ ရောက် ပို့ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ရာ ဂင်ဆီသို့
မရောက်ခင် ဆိုင်းခါ အထက် နားအရောက်တွင် မိုင်းခွဲ တိုက် ခိုက်ခံ ရခြင်း ကြောင့်
၄င်း စစ်လက်နက်အပြည့် တင်ဆောင်လာသော မြန်မာ စစ်တပ် ၏ စစ်ယာဉ်တန်း
မှ စစ်ကား (၅) စီး မှာ လုံးဝ ပျက်စီး သွားကြောင်း ရှေ့တန်း စစ်မြေ ပြင်မှ သတင်းရရှိပါသည်။
at 1/20/2015 08:49:00 PM No comments:
ဖားကန့်ဒေသတွင် ယနေ့ (၅) ရက်မြောက်နေ့အထိ တိုက်ပွဲအနည်းငယ်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
တိုက်ပွဲများဖြစ်နေသည့်ဒေသတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင် PCG အဖွဲ့မှ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ရဲသုံးယောက်အား မကြာခင် PCG မှတဆင့်လွဲပေးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။
PCG အဖွဲ့ရောက်နေသည့်အတွက် တိုက်ပွဲသည် လွန်ခဲ့သည့် ရက်တွေလို မပြင်းထန်ပဲ ငြိမ်းသက်နေကြောင်း နေကြောင်းသိရသည်။
at 1/19/2015 08:44:00 PM No comments:
ယင်းအစည်းအဝေးကို နှစ်ရက်ကြာ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်တွင်မူ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဗဟိုဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ချင်းမိုင်မြို့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။
at 1/19/2015 08:41:00 PM No comments:
ကေအိုင်အေက ဖမ်းဆီးထားသည့် ရဲသုံးဦးကို အစိုးရထံ လွှဲပြောင်းပေးပြီ
ကချင် လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (ကေအိုင်အေ) က ငါးရက်ကြာ ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် ကချင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ကမန်းဒူနော်၏ လမ်းကြောင်းတွင် လုံခြုံရေးလိုက်ပါသည့် ရဲသုံးဦးကို ကေအိုင်အေက ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ (PCG) က တစ်ဆင့် ဖားကန့်မြို့ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများထံ ဇန်နဝါရီ ၁၉ရက် ညနေတွင် လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီဟု ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင် အဖွဲ့ (PCG) မှ ဦးလမိုင်ဂွမ်ဂျာက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
at 1/19/2015 08:40:00 PM No comments:
ဇန်န၀ါရီ ၁၄ ရက်နေ့က ကချင်ပြည်နယ် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးနှင့် လိုက်ပါခဲ့ပြီး ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့ (KIA) ၏ ဖမ်းဆီးခြင်း ခံထားရသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀င် ၃ ဦးကို ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ကချင် ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင် အဖွဲ့ (PCG) ထံသို့ အပြီး လွှဲပြောင်းပေး လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကျနော်တို့ အခုပဲ ကချင် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ တပ်စွဲထား ရာ တောတွင်း တနေရာမှာပဲ အဖမ်းခံထားရတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးကို ပြန်ခေါ်ပြီး ပြန်လာပါပြီ။ ဖားကန့်က မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့ကို ပြန်အပ်မှာပါ။ အခုညနေ ၄ နာရီမှာပဲ သူတို့ဘက်က ကျနော်တို့ကို လွှဲပြောင်းပေးတာ” ဟု ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်ချမ်းရေးအကျိုး ဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးလမိုင်းဂွန်ဂျာက ပြောသည်။
at 1/19/2015 08:39:00 PM No comments:
Myen asuya hpyen ni Gung n-sa lawm ai laknak kaba hte gap
January, 17 ya jahpawt hkying 9:00am aten KIA Dap Ba (2) npu Dap Dung (6) ginra Tang Gau Bum kaw du nga ai myen asuya hpyen dap Hk.L.Y (1), Hk.M.Y (5, 10, 11, 35) pawng hpawm hpung ni hte KIA pawng hpawm hpung ni gasat gala majan byin ai hta KIA pawng hpawm hpung ni padang dip la lu ai lam chye lu ai.
at 1/19/2015 04:59:00 PM No comments:
ရေမဆေး la ni ကြိုင် Company na sau Pepa pung ni nat kau ya
January, 18 ya shani hkying 10:30am kawn 1:30pm ten laman KIA Dap Ba (2) npu Dap Dung (6) ginra Ginsi Hkaw sa lam maga du nga ai Hk.M.Y (10) dap ni hte KIA pawng hpawm hpyen hpung ni gasat gala majan byin ai lam chye lu ai.
at 1/19/2015 04:58:00 PM No comments:
at 1/19/2015 04:50:00 PM No comments:
ဖားကန့်မြို့နယ် သန်းဂေါင် (အောင်ဘာလေ) ကျေးရွာအနီး ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA)နှင့် အစိုးရ စစ်တပ်တို့အကြား ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက် လေးရက်မြောက် တိုက်ပွဲ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေပြီး ပိတ်မိနေသော ဒေသခံ ရွာသားများ စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက် (KDNG) မှ တာဝန်ခံ ကိုစာဂျီက ပြောသည်။
at 1/19/2015 04:46:00 PM No comments:
at 1/19/2015 04:45:00 PM No comments:
(Lachid Kachin) (Hka Kamai)
ဖါးကန့် ဥရု ကျောက်စိမ်းမော်အတွင်းရှိ "အထူးဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ကုမ္ပဏီ" ကျောက်စိမ်းတူးဖေါ်ရေး ကုမ္ပဏီ အား ယနေ့ (၁၈.၁.၂၀၁၅) ရက်နေ့ ညနေ
ပိုင်း၌ ဖါးကန့် ဆိုင်း မော် အတွင်းမှ ရခိုင်ကျပန်း လုပ်သားများ မှ
မီးရှို့ လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဖါးကန့် ဒေသခံများ ထံမှ သိရှိရပါသည်။
at 1/19/2015 10:47:00 AM No comments:
ဖားကန့် တိုက်ပွဲအတွင်း မြန်မာအစိုးရတပ်မှ ဓါတုအဆိပ်ငွေ့ ပါသော လက်နက်ကြီးများအသုံးပြု
ဖားကန့် မြို့ နယ် ဂင်ဆီ (ကံဆီး ) - ဆိုင်းရာ - အောင်ဘာလေ ပါတ်ဝန်းကျင် ၌
ယနေ့နံနက် (၁၈.၁.၂၀၁၅) ရက်နေ့ အစောပိုင်း (၁၀း၀၀)နာရီ ပါတ်ဝန်းကျင်
တွင် မိမိ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း(၆)တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ နှင့် မြန်မာအစိုးရတပ် တပ်မ
(၆၆) လက်အောက်ခံတပ်များ တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မှာ မြန်မာအစိုးရ
တပ် တပ်မ(၆၆) မှ ဓါတု အငွေ့ပါဝင် သည့် လက်နက် အသုံးပြု တိုက်ခိုက်ခဲ့
ကြောင်း ကေအိုင်အေ ရှေ့ တန်းမှ သတင်းရရှိပါသည်။
at 1/19/2015 10:45:00 AM No comments:
အခုရက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်ဘက်မှာ ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့နဲ့ အစိုးရတပ်ဖွဲ့ တိုက်ပွဲတွေ မပြီး ဆုံးသေးခင် ဧရာဝတီရဲ့ ပင်မ မြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မေခမြစ်တစ်ကြောမှာလည်း သေနတ်သံတွေ ကြားလာ ရပြန်ပါပြီ။ ဒီတစ်ခါ ပစ်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ပွားတာကတော့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ ကေအိုင်အေ ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ပူးပေါင်း ပြီး တရားမဝင်ရွှေထုတ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ကွက်တွေကို အစိုးရတပ်ဘက်က ရှင်းလင်းရင်း ဖြစ်ပွားရတာလို့ တပ်မတော်ပိုင် မြဝတီသတင်းစာက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ သိပ်မကြာ ခင် ရန်ကုန်မှာ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားတွေ စုပေါင်းထားတဲ့ NCCT အဖွဲ့နဲ့ အစိုးရကိုယ်စားလှယ် တွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပါဦးမယ်။ အဲဒီ ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်ကနေ တစ်ဆင့် လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက် ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ တစ်တိုင်းပြည်လုံးဆိုင်ရာ အပစ်ရပ်စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မလားဆိုတာ ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါ့မယ်။
at 1/19/2015 10:43:00 AM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းကျေးရွာ အုပ်စု အောင်ဘာလေ ကျေးရွာအနီး တိုက်ပွဲကြားမှာ ပိတ်မိနေ တဲ့ လူနှစ်ထောင်ဝန်းကျင်မှာ တရုတ်နိုင်ငံ သားတွေ ရာဂဏန်း ပါဝင်နေတယ်လို့ တရုတ်ပြည်မှာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့ Global Times သတင်း စာက ဖော်ပြပါတယ်။ အရေအတွက် အတိအကျ ကိုတော့ ဖော်ပြမထားပါဘူး။
at 1/19/2015 10:42:00 AM No comments:
at 1/19/2015 10:41:00 AM No comments:
at 1/19/2015 10:40:00 AM No comments:
ဖြစ်ပွားနေဆဲ ကချင်စစ်ပွဲများရပ်ဆိုင်းရန် UNFC တောင်းဆို
ဖားကန့်မြို့နယ် သန်းဂေါင် အောင်ဘာလေ ကျေးရွာအနီး အခြေစိုက်ထားသော KIA ၏ တပ်မဟာ ၂ လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့နှင့် မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်၏ တပ်မ ၆၆ လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့တို့အကြား လေးရက်မြောက်ထိ (ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်မှ ၁၈ ရက်) တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေမှုများ ရပ်ဆိုင်းရန် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ UNFC က သဘောထား ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုသွားမည် ဖြစ်သည်။
အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တို့အကြား ငြိမ်းချမ်းရေးေ၏ ဆွေးနွေးနေချိန်၊ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နေချိန်အတွင်း KIA နှင့် အစိုးရစစ်တပ်တို့အကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေမှုအပေါ် သဘောထား ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ရန် UNFC က မူအားဖြင့် သဘောတူ ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း UNFC ၏ တွဲဘက် အတွင်းအရေးမှူး (၁) ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
at 1/18/2015 11:10:00 PM No comments:
KIA ဖမ်းထားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ PCG အဖွဲ့က သွားရောက်ခေါ်ယူ
ကေအိုင်အို တပ်မဟာ ၂ လက်အောက်ခံတပ်တွေက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦး ကို မြစ်ကြီးနားမြို့အခြေစိုက် ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုး ဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေက ကေအိုင်အို တပ်မဟာ ၂ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၆ နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ဒီနေ့ သွားရောက်ခေါ်ဆောင်နေပါတယ်။
ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ဦးကို ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့က တာဝန်ယူပြီး အစိုးရထံ ပြန်လည် အပ်နှံပေးဖို့ ကေအိုင်အိုက အကြောင်းကြားလာတဲ့အ တွက် သွားရောက်ခေါ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ PCG အဖွဲ့ဝင် ဦးလမိုင်ဂွန်ဂျာ က ပြောပါတယ်။
at 1/18/2015 11:08:00 PM No comments:
ဆုတ်ခွာပေးခဲ့သော KIA,စခန်းအားလုံး KIA မှ ပြန်လည် သိမ်းပိုက်နိုင်
ဖားကန့် ဒေသ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၆) ၏ ရှေ့တန်း စခန်း များ ဖြစ်သော
အောင်ဘာလေ အနီးရှိ မိုင်ဆပ်ကောင် စခန်း ၊ Wa Je Post၊ RCM ဆုတောင်း
တောင်ကုန်းအနီး မှ စခန်း နှင့် တန်ဂေါင် စခန်း များအား မြန်မာ စစ်တပ် တပ်မ (၆၆) လက်အောက်ခံ တပ်များမှ (15-16,Jan,2015) ရက်နေ့ တို့ တွင် စစ်အင်အား အလုံးအရင်း ဖြင့် ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။
at 1/18/2015 10:58:00 PM No comments:
ဖားကန့်အောင်ဘာလေတွင် ယနေ့တွင်လည်း တိုက်ပွဲပြင်း ထန်ဆဲဖြစ်ပြီး ယခုအထိ အစိုးရတပ်မတော်မှလည်းလက်နက်ကြီး အလုံး ၁၈၀ ကြိမ် ပစ်ခတ် ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
ထိုဒေသတွင် ယခုအချိန်တွင် အစိုးရတပ်မတော် တပ်သားများ အယောက် ၁၂၀၀ ခန့်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၆)မှ အရာရှိများမှဆိုသည်။
နံနက်မှစတင်ပြီးဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး နေ့လည်ပိုင်းတွင် ခနတာ နားပြီး ပြန်လည်ပြင်းထန်းလျှက်ရှိကြောင်းလည်းဆိုသည်။
at 1/18/2015 05:43:00 PM No comments:
ဖါးကန့် တိုက်ပွဲ အခြေအနေ ၊အစိုးရတပ်ထံမှ လက်နက်ကြီးများ သိမ်းဆည်းရရှိ
ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၂) လက်အောက်ခံ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၆) ဥရုဆိုင်း
မော် ဖားကန့် ဒေသတွင် မြန်မာ စစ်တပ် တပ်မ (၆၆) လက်အောက်ခံ တပ်များ
နှင့် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၆) တို့ အကြာား တိုက်ပွဲ အပြင်း အထန် ပြန်လည်
ဖြစ်ပွား သည် မှာ ယနေ့ နဲ့ဆို (၄) ရက်ထဲရောက်ရှိ လာ ပြီ ဖြစ် ကြောင်း
ထိုသို့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား သည့် (၄) ရက် အတွင်း တိုက်ပွဲ ပထမနေ့ (၁၅. နှင့် ၁၆၊
၁၊၂၀၁၅) ရက်များတွင် ကေအိုင်အေ ဘက် မှ ပြည် သူလူထု ကျေးရွာ သားများ
ကို ထိ ခိုက်မည်ကို ထောက်ထား ပြီး ခံ စစ်သဘော အနေ အထား ဖြင့် သာ နေ
ခဲ့ ပြီး ၄င်းတို့ ၏စခန်း (၄) ခု အထိ ဆုတ်ခွာ ပေးခဲ့ ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
at 1/18/2015 05:42:00 PM No comments:
at 1/18/2015 05:41:00 PM No comments:
Wunpawng Mung Dan Shang lawt Hpyen Dap KIA, Dap Ba (2) n pu
KIA, Dap dung (6) Hpakant ginra de myen tai hpyen ni (15.1.2015)
ya sha ni kawn hpyen ngun ka ba , Lak nak ka ba ni hte maja laja
la na htu ga sat wa ai majaw tinang KIA, maga kawn Mung mara
masha hpe hkra ma chyi na tsang ai majaw Tinang hpyen dap Post
n kau hpe (15-16,Jan ,2015) ya sha ni hkanegan yen kau sai
re lam chye lu ai.
at 1/18/2015 05:40:00 PM No comments:
ကချင်ဝန်ကြီးနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အချို့ကို ကချင်တပ်ဘက် က ခေတ္တထိန်း သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက် ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ်ထဲမှာ ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်နဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ကြား တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ တိုက်ပွဲကြား ပိတ်မိနေတဲ့ရွာသားတွေ ကို သွား ကယ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး ယာဉ်တန်းတွေကို မြန်မာ စစ်တပ်ဘက်က သွားခွင့်မပေးဘဲ ပိတ်ထားတဲ့ အတွက် စစ်ဘေးဒဏ်သင့် ဒေသခံ ပြည်သူတွေကို ကယ်ဆယ်ရေး အခက်တွေ့နေပါတယ်။ မငြိမ်းချမ်းနိုင်သေးတဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ထဲက တကျော့ပြန် စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရဲ့ နောက်ဆုံး အခြေအနေမဆုမွန်က စုံစမ်းတင်ပြထားပါတယ်။
at 1/18/2015 05:12:00 PM No comments:
ကချင်ဒေသမှာ တိုက်ပွဲတွေ ၃ ရက်မြောက် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲ
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းကျေးရွာအုပ် စု အောင် ဘာလေကျေး ရွာအနီးမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲကြားမှာ ပိတ်မိနေဆဲ ဒေသခံရွာသား နှစ်ထောင်လောက် ကို ဖားကန့်မြို့နယ် အခြေ စိုက် နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ ဘာသာရေးနဲ့ လူမှုအဖွဲ့ အစည်း တာဝန်ရှိသူတွေက ကားအစီး ၁၅၀ ကျော်နဲ့ သွားရောက်ခေါ်ဆောင်ပေမဲ့ အစိုးရတပ်မ ၆၆ လက်အောက်ခံတပ်တွေက သွားခွင့်မပြုဘူးလို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
လုံးခင်းကျေးရွာနဲ့ ၃ မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ ဆန်ခါကျေးရွာမှာ တားမြစ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှာပါတဲ့ ဖားကန့်မြို့နယ် NLD ပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင့်စိုးက RFA ကိုပြောပါတယ်။
at 1/18/2015 05:10:00 PM No comments: